トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Umehluko inqubomgomo ibhizinisi ngenxa indawo wamakhaza pachinko (Station Agents & ezitolo suburban)
Noma yimuphi esitolo, ngicabanga ukuthi kuyinto ukwenza ibhizinisi namadivayisi ahlukahlukene izimo indawo. Pachinko azihlukile esinalo izinyathelo ehlukahlukene ahlukahlukene, ibhizinisi kanye nokwenziwa esitolo yabo yesithombe izimo indawo. Ngokwesibonelo, phambi esiteshini izitolo kanye izitolo suburban, umehluko izici ezinkulu. Ake uqhathanise umehluko ngesikhathi ikhasimende base kanye nokusebenza ezimatasa.
■ pachinko eshintsha lokufeza ibhizinisi umkhawuko wesikhathi
Station phambi wamakhaza esiteshini pachinko ikhasimende base kanye isiqongo ukugijima, izitolo eselungela e eziningi yedolobha nabahamba ngezinyawo. Ukuze eduze esiteshini sesitimela, futhi izisebenzi zasemahhovisi ezingamaphesenti ekhaya nasebekhulile futhi indlela ekhaya ngivela emsebenzini kusukela izinsizwa nezintombi, silindele ikhasimende phansi ezihlukahlukene ubudala. Ikakhulukazi, le ndlela yokuziphatha landile ngezinsuku zeviki. Ngokuhamba kusihlwa kusukela ekuseni, kungcono, ezifana besifazane kanye nabantu asebekhulile abaningi, kuyoba ngokuvamile ikakhulukazi band owesifazane isikhathi.
Kodwa phambi ukusebenza esiteshini isiqongo kuyinto of enjalo lapha. Kusukela kokunye ukuhlwa aphume emuva kungcono, eye kokuza esitolo kusukela
ekuseni, ngendlela indawo, kulokhu abasebenzi ezikhokhelwayo emva umsebenzi uzoqala ukuba alandise ngala iningi ukusebenza. Ngokusho kulokhu, yini inzuzo okukhulu kwamakhasimende base okungukuthi, 's isici enkulu phambi esitolo esiteshini.
isitolo lapho kukhona isikhathi yokuwohloka imisebenzi kwaleso sisho, ngoba kukhona amakhasimende okufanele zibuyiselwe kulahliwe ngisho sizindza lesicinile, kuyodingeka njengenye izinqumo futhi ngoba sihlose khona.
esteshini abanolaka phambi mncintiswano, esitolo awukwazi ukuheha amakhasimende 7 ntambama noma 8 pm phakathi nezinsuku 6 ezimpondweni, it has sokusinda kuba nzima.
(※ By indlela, uma esitolo has ukulungisa ibhola ukuthi yini nge ROM Yara Horukon, inketho ukukhetha off le izoni yesikhathi.) _ x000D_
Nokho, ukuze abasebenzi ezikhokhelwayo iholide kuyiholide, ukusebenza isiqongo nakusihlwa kusukela emini, kuyoba ukugeleza ehluke ngokuphelele futhi phakathi nezinsuku. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi esitolo mncintiswano ngokuvamile, ngisho ngokushesha nje ibhola aphume kwezinye izitolo, ukusebenza bazobuyekezelwa isishintshe kakhulu.
■ suburban pachinko emakhazeni kwamakhasimende base futhi isiqongo Ngo umkhawuko wesikhathi
wokusebenza ngokuchofoza, bese uyasho kutsi mayelana esitolo suburban, ungalindeli usayizi base ikhasimende ukuba mayelana uphethiloli esitolo. Ekhuluma abashisekeli, noyise yangakini omama kanye ukuphumula, ubudala futhi ngesikhathi ukuphakama lapho sibona eziningi ukubukeka komuntu, ezifana 60s kusukela 40s.
izivakashi ezingeni ulwazi kuqhathaniswa ongaphakeme, kuba eziningi, kukhona nezinye mkhuba okungukuthi ithebula elingenalutho elimnandi sizindza lesicinile nail ukulungiswa.
nje akusiyo yokudlela ezidumile ngokwanele ukubiza amahemuhemu edolobheni wamakhaza pachinko, ngubani yokupaka evakashela imoto noma ngesithuthuthu noma okunye okunjalo, kukhona, Akusho kakhulu, ngakho ngisho nalabo abeza esitolo kusukela ekuseni hhayi ukuthi abaningi isimo esikhona manje.
iningi, ngoba uma uhlala endaweni yakho iza esitolo, egijima kuyinto uqale ukunwebeka at 12 ezimpondweni ngaphambi nangemva ntambama, ukukhiqizwa isiqongo kuyodingeka izitolo eziningi emhlabeni 3:00 pm kusuka 1 ntambama. Futhi, esitolo suburban wena kunomehluko omncane phakathi ukusebenza isiqongo ngosuku lweviki. Ngisho noma kukhona esitolo ukuncintisana, ngoba akuyona ukuthi eduze, kulula ukubeka amakhasimende isilungisiwe.
ukwenza ukusetshenziswa kahle ekulweni Ngokusekelwe kulezi zici ???
1. Futhi ukusebenzisa ngesikhathi somkhawulo
esitolo indawo kwesizini yokunika, ngoba isikhathi lapho msebenzi enwetshiwe ihlukile, lapho njengoba omunye isu ukuthi ukukhetha off isikhathi ezishisa sosuku. Njengoba sasemakhazeni pachinko, of course, ngoba umuntu ekhishwe ibhola out eziningi lapho kukhona ukusetshenziswa okusezingeni eliphezulu izinga singenziwa nokuncenga esitolo, it is hhayi kuhloswe khona.
2. Ngaleso isikhathi lapho isikhathi
amakhasimende amakhasimende esitshalweni impambano azothanda ithebula elimnandi sizindza lesicinile futhi nail kungenzeka ukuthatha. Lokhu kungenxa yokuthi, ngokwesibonelo, endabeni amakhosikazi angasebenzi, kanye-ke kuyoba kungakhathaliseki ukuthi die sinamandla, ngakho akudingeki ukuba ukulungiswa kokudla kwakusihlwa, enginakho eziningi kubantu wawuyosisiza ngokungathandi. Pachipuro ukuthi uhola e isu ukuthi ziyoyizwa isiteji enjalo futhi sikhona. _x00 0D_
3. Ngu ucwaningo nolwazi ezingeni
ikhasimende base amakhasimende, yingakho kuyaqondakala ukuthi ezingeni izilaleli ngubani. Level kukhona kungenzeka ukuthi isinyathelo ezingenalutho okumnandi njengoba low abantu ngokuvamile uthenga. Yiqiniso, ukuthi abantu nge izinga eliphezulu akuyona ngisho umuntu oyedwa, kodwa okungenzeka ukuthi babe in lokuthi esitolo ngokwayo alinaso ukunambitheka, Sajikagen emaceleni kuphela uya Phucuzani isipiliyoni empini ngeke.